Waqooyiga Kuuriya oo tijaabinaysa Nucliyeer saddexaad iyo wallaac soo foodsaaray Maraykanka iyo Reer Galbeedka | Berberanews.com
Home WARARKA Waqooyiga Kuuriya oo tijaabinaysa Nucliyeer saddexaad iyo wallaac soo foodsaaray Maraykanka...
Waqooyiga Kuuriya oo tijaabinaysa Nucliyeer saddexaad iyo wallaac soo foodsaaray Maraykanka iyo Reer Galbeedka
Kuuriya-(Berberanews)-Dawladda Waqooyiga Kuuriya, ayaa dhammaystirtay u diyaargarowga nuclearkii saddexaad ee ay sammayso, sida uu Wakaaladda Reuters u sheegay sarkaal u dhuundaloola wadanka Kuuriya.
Waqootiga Kuuriya waxa uu haatan u muuqdaa inuu dhammaystiray tijaabadda Nuclearkii saddexaad, ka dib markii uu hore ugu guulaystay laba tijaabo sanadihii 2006 iyo 2009, taasoo cadaadis iyo cagajuglyan dheeraada ay ku qaadeen dalalka Reer Galbeedka oo uu Maraykanku hormood u yahay, kuwaasoo aan ogolayn dal kale oo yeesha awood la mid ah tooda.
Waqooyiga Kuuriya waxay todobaadkii hore ku guuldaraysteen tijaabadda Gantaalka ridada dheer 13 April, kaasoo cambaarayn caalamiyi kaga timi qaramadda Midoobay iyo dalalka Reer Galbeedka oo cabsi xoog leh soo foodsaartay. Gaar ahaan Maraykanka oo aaminsan in haddii Waqooyiga ku guulaysato isku-daygeeda samaynta gantaalaha ridada dheer ay u suurtageli doonto sammaynta gantaalaha rabadhka ka sammaysan oo ay ka cabsi qabaan Maraykanku inay gaadhayaan dalkeeda.
Washington, Seoul and Tokyo, oo cabsida ugu badani ka haysato Waqooyiga Kuuriya, ayaa si wallaac leh isha ugu haya Tallaabooyinka Horumarinta Milateri ee uu wado Madaxweynaha aabihii tallada ka dhaxlay ee Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un, iyadoo khubaradda aqoonta u leh Nucearka ee arrintan la socdaa sheegeen suurtagalnimada guul Waqooyiga Kuuriya ka gaadho sammaynta Nuclearkan.
Khubaro dhinaca Milateriga ah, ayaa ayaa sheegay inay Waqooyiga Kuuriya helayso Macdanta la bacrimiyay ee loo addeegsado Nuclearka nooceedu yahay kuwii lagu riday Hiroshima 70 sanno ka hor.
Bishii October 2006, Waqooyiga Kuuriya waxay noqotay dalka sideedaad ee Quwadda Atoomikadda (Nuclearka), ka dib markii ay dhulka hoostiisa ka sammaysay tijaabaddii ugu horraysay ee Nuclear ay yeelato, inkastoo dalka Waqooyiga Kuuriya ka mid noqday dalalka Nucearka haysta.
Previous articleBidaartu Ma Cudur-baa Mise Waa Calaamadaha Da’da? Waa Su’aal u Baahan In Si Cilmiyeysan Looga Jawaabo
Next articleXiisadda Labada Sudan oo cirka isku shareertay, Madaxweyne Bashiir oo diiday wadahadal iyo cabsi laga qabo dagaal lagu hoobto